कम्पनी विश्लेषण : मञ्जुश्री फाइनान्सको आकर्षक नाफा भित्रको वास्तविकता « Nepal Bahas
कम्पनी विश्लेषण : मञ्जुश्री फाइनान्सको आकर्षक नाफा भित्रको वास्तविकता
प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७७, आईतवार १४:५६
११ साउन, काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्सले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । खुद मुनाफामा २८४ प्रतिशतको वृद्धि गरेको फाईनान्सले बजारमा निकै चर्चा पाएको छ। वित्तीय विवरणलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दा कम्पनीले कमाएको खुद मुनाफाको ठूलो हिस्सा कम्पनीले गरेको गैर संचालन मुनाफा रहेको छ । कम्पनीले कुनै सम्पत्ति बिक्री गरेर र सो मुनाफा देखाउन सफल भएको छ । चौथो त्रैमासमा २८ करोड खुद मुनाफा कमाएको फाइनान्सको गैर संचालन आम्दानी मात्र २० करोड माथि रहेको छ ।
वि.स. २०६४ सालमा स्थापना भएको मञ्जुश्री फाइनान्सको संचालक समितिको अध्यक्षमा दामोदरप्रसाद गौतम रहेका छन् । त्यस्तै संचालक समितिको सदस्यमा चिन्तामणि गौतम, दिलामान सिंह चन्द र इन्दिरा पण्डित घिमिरे रहेका छन् । त्यस्तै बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा सन्तोष निरौला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् भने नारायण सुवेदी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।
कम्पनीको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को चौथो त्रैमास र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को चौथो त्रैमासलाई दाँजेर हेर्दा :
खुद व्याज आम्दानीमा सामान्य वृद्धि :
मञ्जुश्री फाइनान्सको प्रमुख आम्दानीको श्रोतमा रहेको खुद व्याज आम्दानी ६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा ३८ करोड ५ लाख खुद व्याज आम्दानी गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को चौथो त्रैमासमा कम्पनीले ३५ करोड ८७ लाख खुद व्याज आम्दानी गरेको थियो ।
कर्मचारी खर्च निकै बढ्यो !
प्रमुख आम्दानीको श्रोत ६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भए पनि कर्मचारी खर्च भने ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। १ वर्षको अवधिमा कर्मचारी खर्च ८ करोड २१ लाखबाट वृद्धि भएर १३ करोड ३१ लाख पुगेको छ ।
संचालन मुनाफा ९० प्रतिशतले वृद्धि :
संचालन मुनफा भने करिब ९० प्रतिशतले वृद्धि भएर १९ करोड ७१ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६मा जोखिम बापत १३ करोड ५० लाख व्यस्थापन गर्नु परेकोमा यो वर्ष भने सो शिर्षकमा १ करोड २ लाख मात्र व्यवस्थापन गर्नु परेको छ ।
गैर संचालन मुनाफा २० करोड माथि :
फाइनान्सको गैर संचालन मुनाफा २० करोड ४२ लाख रहेको छ । यसरी २० करोड माथिको फाईनान्सले आफ्नो नामको कुनै सम्पत्ति बेचेर मुनाफामा आकर्षक वृद्धि देखाउन सफल भएको हाे ।
खुद मुनाफा २८४ प्रतिशतले वृद्धि :
गैर संचालन मुनाफा २० करोड माथि भए संगै कम्पनीको खुद मुनाफा २८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को चौथो त्रैमासमा ७ करोड ३१ लाख खुद मुनाफा गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्म २८ करोड ९ लाख खुद मुनाफा गरेको छ ।
प्रतिशेयर आम्दानी ३४ रुपैयाँ :
कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ३४ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ । खुद मुनाफामा आकर्षक वृद्धि भए संगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी पनि आकर्षक वृद्धि भएको छ ।
नोट : श्रावण ८ गतेको बजार मूल्य
मूल्य आम्दानी अनुपात ८ गुणा :
कम्पनीको अन्तिम बजार मूल्यको आधारमा कम्पनीको मूल्य आम्दानी ८ दशमलव ५९ गुणा रहेको छ।
खराब कर्जा ३ प्रतिशत माथि :
फाइनान्सको खराब कर्जा भने अलिक धेरै रहेको छ। खराब कर्जा ३ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ।
आधार व्याज दर घट्यो
आधार व्याजदर घट्दै १० दशमवल ६७ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६मा आधार व्याजदर ११ दशमलव ३४ प्रतिशत थियो ।
वितरण योग्य मुनाफा ११ करोड ९४ लाख :
कम्पनीको वितरण योग्य मुनाफा ११ करोड ९४ लाख रहेको छ। यो वितरण योग्य मुनाफाको आधारमा कम्पनीको लाभांश दिन क्षमता १४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ ।
२० करोड माथि गैर संचालन मुनाफा नभएको भए के हुन्थ्यो ?
कम्पनीले यदि २० करोडको गैरसंचालन मुनाफा नगरेको भए कम्पनीको कर अघिकाे मुनाफा १९ करोड माथि मात्र हुन्थ्यो र ३० प्रतिशत रकम करलाई राख्दा कम्पनीको मुनाफा जम्मा १३ करोड माथि देखिन्थ्यो ।
एनएफआरएस प्रणाली अनुसार कम्पनीले मुनाफाबाट १० करोड २४ लाख रुपैयाँ रेगुलटरी रिजर्भमा व्यवास्थापन गर्नु परेको छ । यदी कम्पनीले गैर संचालन मुनाफा नगरेको भए कम्पनीको वितरण योग्य मुनाफा जम्मा ३ करोडको हाराहारीमा हुने सम्भावना थियो । जसबाट लगानीकर्ताले निकै थोरै लाभांश पाउँथे ।
निस्कर्ष : कम्पनीको अहिले प्रतिशेयर आम्दानी निकै धेरै रहेको छ । लगानीकर्ताहरु आकर्षक प्रतिशेयर आम्दानी र कम मूल्य आम्दानी देखिएकोले यो शेयरमा धेरै आकर्षित भएको देखिन्छन् । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीले गरेको आम्दानी कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ । कम्पनीले सधै गरिरहने व्यापारमार्फतबाट आएको आम्दानी टिकाउ हुन्छ भने कुनै सम्पत्ति बेचेर आएको आम्दानीले अर्को वर्ष सो तुलनामा आम्दानी वृद्धि नहुन पनि सक्छ ।
अहिलेको वितरणयोग्य मुनाफालाई अधार मान्दा कम्पनीले १४ प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांश दिन सक्छ।
प्रतिवाद: उपलब्ध तथ्यांकले गरिएको विश्लेषणमा निर्णय लिनु अघि थप अनुसन्धान गर्नु होला।